6 Jimicsi loogu talagalay Xanuunka Dhabarka ee Hoose ee Xanuunka daran (Lumbago) | Jimicsi iyo jimicsi.
22 / 07 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga/av waxyeelladayda
Miyaad dhib ku qabtaa xanuun dhabarka hooseeya oo daran? Halkan waxaa ah 6 jimicsi oo wanaagsan oo yareyn kara xanuunka dhabarka hooseeya, xoojinaya dhabarkaaga isla markaana yareyn kara cudurka lumbago. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan jimicsiga, caafimaadka ama jimicsiga, fadlan nala soo xiriir Facebook eller YouTube.
Jimicsiyada aad si caadi ah u sameyn karto waxay kuxiran tahay sababta xanuunkaaga. Halkan waxaan isku daynay inaanu sameysanno hage guud oo loogu talagalay jimicsiga iyo jagooyinka yareyn kara xanuunka dhabarka hooseeya iyo lumbago - waxaan sidoo kale si xoogan kuugu dhiirigelinaynaa inaad raadsato daaweyn firfircoon bukaan socod eegtooyinka calaamadahaaga iyo jirrooyinkaaga. Xaaladaha qaarkood sidoo kale waxay noqon kartaa wax faa'iido leh in la isticmaalo waxa loo yaqaan lumbar dhabarka dambe si loo yareeyo murqaha xanuunka iyo kala goysyada. Haddii kale, waxaa lagugu dhiirigelinayaa inaad ku celceliso layliyadaan socodka, bushkuleeti ama dabaasha - sida dhabarkaagu oggol yahay. Xor baad u tahay inaad baarto sanduuqa raadinta dhowr hagitaanno wanaagsan oo xirfadeed oo aan hore u soo daabacnay. Markaad fiicnaato, waan kugula talineynaa jimicsiyada caloosha og laylisyada sinta.
1. Booska degdegga (90/90 booska)
Waxaan ku bilaabeynaa jago aan dooranay inaan ugu yeerno "xaalad deg-deg ah" ama sida aan shakhsiyan ugu yeerno: booska "90/90". Tani waa mowqif ay cilmi baaristu muujisay inaad ugu yartahay culeyska saaran laf-dhabarka hoose iyo muruqyada dhabarka hoose - waa inaadan ku jiifsan muddo dheer, waana haddii kale lagu dhiirrigelinayaa inaad ku sii socoto waxa dhabarku u oggol yahay.
Ku jiifso sagxadda dhedigu 90 digrii iyo weyliyihiina waa 90 darajo, sida sawirka ka muuqata sawirka - waxaad ubaahan kartaa inaad duub tuwaal dhuuban oo aad gasho dambiisha hoose ee dhabarka hoose. Haddii xanuun dhabarka hooseeya ah oo deg deg ah, waxaad isku dayi kartaa inaad jiifto tusaale ahaan 3-5 jeer maalintii qiyaastii 30 daqiiqo markiiba. Way fiicnaan kartaa in la isku daro mawqifkan is jiiska, maadaama tilmaamaha ay yihiin "20 daqiiqo oo fasax ah, 20 daqiiqo oo soo noqnoqda, ku celi".
3. Badhida cagaha (Jimicsiga Dhabarka)
Layligani wuxuu fidaa oo abaabulayaa laf dhabarta.
Laga bilaabo Wacan: Istaag dhammaan afarta gees ee tababarka. Isku day inaad qoortaada iyo dhabarkaaga ku hay meel dhexdhexaad ah, oo waxoogaa dheereyn ah.
taag: Ka dib hoos u dhig cidhibtaada - dhaqdhaqaaq dabacsan. Xusuusnow inaad ilaaliso qalooca dhexdhexaad ee laf dhabarta. Qabo fidinta ilaa 30 sekan. Kaliya dhar inta aad ka raaxeysaneyso.
Ku celi jimicsiga 4-5 jeer. Jimicsiga waxaa la sameyn karaa 3-4 jeer maalin kasta.
4. Abaabul dhinac fudud (Duub jilibka)
5. Taageerida caloosha
Layli abaabul iyo abaabul oo galaya gadaal u socodka dhaqdhaqaaqa - oo sidoo kale loo yaqaan kordhin.
Layligani wuxuu ku fidaa oo u abaabulaa dhabarka hoose qaab deggan. U jiifso calooshaada oo xusulbahaaga ku xooji calaacashahaaga sagxadda. Qoortaada ku hay meel dhexdhexaad ah (oo aan foorarsaneyn) oo si tartiib ah dib ugulaabid adoo cadaadis ku hoos marinaya gacmahaaga. Waa inaad dareentaa xoogaa fidsan muruqyada calooshaada markaad dib u kala bixinaysid - ha aadin ilaa aad waxyeello gaarsiiso. Ku hay booska 5-10 sekan. Ku soo celi 6-10 ku celcelin ah.
6. Luga ilaa xabadka (jimicsiga gadaashiisa iyo kursiga hoose)
Waxyaabaha kale ee is-miidaaminta ah iyo alaabada taageerada
dhaqdhaqaaqa: U lugee socod lugtaada ah sida ugu wanaagsan uguna habboon dhul adag - laakiin haddii dhabar xanuunku aad u xoog badan yahay oo ay taasi shaqeyn weydo markaa waa inaad la qabsataa dhaqdhaqaaqa si waafaqsan.
Taageerada dambe: En dib u hagaajinta lumbar toosan (halkan guji si aad inbadan u aqriso - wuxuu u furmayaa daaqad cusub) waxay ku siin kartaa deganaan wanaagsan iyo xanuun yareynta marka aad u baahato inta badan Firfircoonida iyo muruqyada dhabarka hoose, waxay ku caawin kartaa gargaar si ay fursad ugu helaan inay ku dejiyaan heer xiisad caadi ah. Lumbar backrests sidoo kale waxay ku shaqeeyaan iyagoo siinaya muuqaal wanaagsan oo dhabarka ah (waxay ka hortagtaa booska ciriiriga ah iyo qallooca dhinaca dambe ee hoose), iyo sidoo kale isku xoqid iyo kuleyl oo gacan ka geysan kara wareegga dhiigga oo si fiican u socda
En dib u hagaajinta lumbar toosan waxay yareyn kartaa murqaha murqaha waxayna sababi kartaa adeegsiga saxda ah ee dhabarka hoose. Taabo sawirka ama iyada si aad wax dheeraad ah u aqriso.
Xanuunka Xanuunka Xumada Biyo qabe waa daaweyn xanuun baabi'iya oo dabiici ah oo yareyn kara xanuunka isla markaana bixin kara calaamadaha xanuunka.
VIDEO: 7 Jimicsi oo looga soo horjeedo Osteoarthritis / Xiro Hip
Halkan waxaa ah 7 jimicsi oo fudud oo loogu talagalay osteoarthritis, oo sidoo kale loo isticmaali karo xanuunka dhabarka daran. Tus xushmad.
Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto maqaalkan asxaabtaada, asxaabtaada iyo dadka aad taqaan. Haddii aad rabto maqaallo, jimicsi ama wixii la mid ah oo loo soo diro dukumiinti ahaan ku celcelin iyo wax la mid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, kaliya si toos ah uga faallo maqaalka adoo adeegsanaya qaybta faallooyinka ee qaybta hoose ee maqaalka - ama si aad noola soo xiriirto (gebi ahaanba bilaash ah) - waxaan ku dadaalaynaa sidii aan kuu caawin lahayn.
PAGE xiga: - Xanuunka dhabarka oo hooseeya? Waa inaad tan ogaataa!
Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka dhabarka hooseeya?
Sidoo kale aqri: - 5 Jimicsi oo ka dhan ah Sciatica
Sidoo kale aqri: - 4 Lebbiska Dharka ee loo yaqaan 'Stiff Back'
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/90-90-akuttstilling.jpg?media=1648573622 507 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-07-22 10:27:572018-11-07 19:05:216 Layliyo loogu talagalay Xanuunka Dhabarka ee Hoose ee Aad u Xun
Saynisyahannada ayaa dib ugu soo celiyay aragtida ku jirta jiirka indhaha markii ugu horreysay! Daaweynta Cusub Waxay Ka Hortagi Kartaa Hip Prosthesis!